လမ်းဖြင့်စပိန်5- ကျနော်တို့စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်
Bierzo ၏စပိန်ဝိုင်ရုံ fad ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေ့က ပို. ပို. ဝယ်လိုအားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မရ
Hannibal သမိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဗျူဟာတွေထဲကဖြစ်လူသိများနေတဲ့ Carthaginian ယေဘုယျခဲ့များနှင့်အထူးသဖြင့်မိမိအဘို့
35 အကြောင်းကို Cedrillas turolense ၏မြို့နယ်မှမြေများမြစ်ကြီးများကချိုး, မြို့တော် Teruel ကနေကီလိုမီတာ
လက်ရှိတွင် Bodegas Pradorey ကသိမ်းပိုက်အဆိုပါအိမ်ခြံမြေ၏သမိုင်းအခါ domains များ, အစောပိုင်းတစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုမှနောက်ကျောစတငျရ
ကျနော်တို့စပိန်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာထားကြပါတယ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ဆိုက်စတာတွေစပျစ်ရည်, ဒိန်ခဲ, ရီးယန်း, သံလွင်ဆီ, အဖြစ်စပိန်ကနေအကောင်းဆုံးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ထုတ်ကုန်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည် သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အံ့သြဖွယ်နေရာများ, ယင်း၏ပိုင်ရှင်တွေ, အကောင်းဆုံးပရိုမိုးရှင်းများ, ပု Gran မှတစ်ဆင့်နှင့်ပိုပြီးအပေါ်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့စပိန်၌တည်ရှိ၏ထားကြပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်